I-Mirror ifakwe i-99.5% ye-alumina ring ceramic China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component > I-Mirror ifakwe i-99.5% ye-alumina ring ceramic
I-Model No.: JH.SC.006
Lokhu ku-99.5% kwe-aluminium oxide ye-ceramic ring eyenziwe ngokucindezela okomile, bese uthola umzimba omncane kakhulu we-ceramic ngaphandle kwama-pores ngaphakathi kwawo.
Ukuze uhlangabezane nokusetshenziselwa okusemthethweni komhlangano, kudingeka ukugaya nokugaya okwesibhakabhaka, ukubekezelelana komzimba kufinyelela ku-0.01mm, noma kungcono emva kokubumba. Ngaphandle kwalokho, zombili iziphetho kudingeka zidutshulwe ukuze kunciphise ukuxabana.
Njengoba sikwazi ukuklama isikhunta kanye nenqubo yokukhiqiza ubuciko, siyakwazi ukukhiqiza izingxenye ezihlukahlukene eziyinkimbinkimbi ze-ceramic ngokugaya okuhle, ukufakelwa kwe-CNC, ukusika ngokuqondile nokunye. Kungakhathaliseki ukuthi kukhonjiswa noma ukukhiqizwa okukhulu kwezindleko, sisekela lolu hlobo lwenkonzo.
Emile Ngokucindezela I-Alumina Ring Ceramic
I-Mirror Ring Ekhonjiwe I-Ceramic Ring